Ny masoivoho any Madrid dia nanasa ny UNWTO Bribery Cocktail tao amin'ny Ritz: Iza no handeha?
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Ny masoivoho any Madrid dia nanasa ny UNWTO Bribery Cocktail tao amin'ny Ritz: Iza no handeha?
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Hotels & Resorts • fivoriana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Amin'ity herinandro ity ny sekretera jeneralin'ny UNWTO dia hampiala voly ireo masoivoho rehetra avy amin'ireo firenena mpikambana nahazo mari-pankasitrahana ao Espaina amin'ny cocktail mahafinaritra ao amin'ny hotely manokana sy lafo indrindra ao Madrid - ny Ritz.
Ny UNWTO dia tia manao kolikoly amin'ny ambasadaoro amin'ny sakafo hariva na zava-pisotro - ary hita izany.
Zurab Pololikashvili, sekretera jeneralin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany ankehitriny dia hanao hetsika amin'ity herinandro ity, araka ny vaovao voarain'ny eTurboNews loharanom-baovao.
Tamin'ny volana Janoary dia nisy sakafo hariva tany Madrid ihany koa, ka ity no laharana faharoa.
Iza avy ireo masoivoho vonona ny hanatrika hetsika toy izany tohanan'i Georgia na UNWTO, ary mazava ho azy fa natao hahazoana fanamafisana an'i Zurab Pololikashvilary mandritra ny fe-potoam-pivoriana faharoa
Ny hetsika dia natao mazava tsara, ka tsy hametraka fanontaniana na hanohana ny latsa-bato miafina ao amin'ny fivoriambe ny Masoivoho. Antenaina fa hivoaka ny lisitry ny vahiny.
Ny toerana misy an'i Madrid dia ny Ritz:
Mandarin Oriental Ritz, Madrid dia lapan'ny Belle Époque tsara tarehy hita ao amin'ny Telozoro Volamena malaza an'ny Art of Madrid. Nandritra ny 110 taona mahery, ny hotely dia nampiantrano ny mpanjaka sy ny olo-manan-kaja ary ny sasany amin'ireo vahiny manan-kaja indrindra eran-tany. Ity fananana mahavariana ity dia tandindon'ny rendrarendra sy ny hatsarana.
Ny fifindran'ny Fivoriamben'ny UNWTO avy any Maraoka ho any Madrid amin'ny ora farany dia heverina fa ny ankamaroan'ny firenena manatrika ny fivoriambe dia hisolo tena ny masoivoho monina ao Madrid.
Tombontsoa mazava sy kajikajy ho an'i Zurab izany mba hahazoana ny latsa-bato ho fanamafisana indray. Zurab no ambasadaoron'ny Repoblikan'i Zeorzia tao Madrid nandritra ny taona maro ary mahafantatra ny fomba fiasany eo amin'ny fiaraha-monina diplaomatika.
Efa nataony sarotra sy lafo ny fandraisana anjaran’ny minisitry ny fizahantany. Ireo firenena manana masoivoho any Espaina no tena handefa ny ambasadaoro, firenena maro hafa tsy andrasana handray anjara mihitsy.
Tombony ho an’ny masoivoho ny fifidianana fa tsy ny minisitry ny fizahantany
Mora kokoa ny resy lahatra amin’ny sekretera jeneraly ny masoivoho. Mila misoroka ny fangatahana latsa-bato miafina i Zurab mba hahazoana antoka ny fanendrena azy indray.
Mila manana ny ankamaroany amin'ny 2/3 amin'ireo firenena mpikambana manatrika ny fifidianana ho fanamafisana azy indray izy.
Manontany tena ny olona hoe firy amin'ireo firenena mpikambana, zara raha afaka mandoa ny anjara birikiny ary maniry mafy ny hahazo fanampiana manan-danja avy amin'ny masoivohon'ny Firenena Mikambana, no hiharan'ny hetsika mihoa-pampana toy izany.
Tia fialam-boly i Zurab, ary niasa ho azy foana izany.
Iray alina talohan'ny nandanian'ny Filankevitra Mpanatanteraka ny fifidianana azy indray tao Madrid ary tamin'ny hetsika miafina nataon'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany, dia nisy fiaraha-misakafo natao hanombatombana firenena 34 nampiana tao amin'ny fandaharan'asan'ny UNWTO Fifidianana tamin'ny Janoary 2021.
Ny chef espaniola malaza Dani García dia hanomana ny sakafo hariva amin'ny kolikoly ao amin'ny Four Seasons Hotel any Madrid nandoa sy natrehin'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Georgia.
Izany no nahatonga ilay kandidà tokana nifaninana tamin'i Zurab ho tezitra mafy ary niteraka volomaso na aiza na aiza. Tsy nanatrika ny sakafo hariva ilay kandidà mifaninana avy any Bahrain.
Tamin'ny taona 2017 dia nosoloina ny fanasana ireo solontena mpifidy amin'ny lalao baolina kitra lany ny sakafo hariva, avy amin'ny masoivoho Zeorziana any Madrid.
UNWTO dia nanao kolikoly firenena 34 noho ny sakafo hariva, Georgia…
Ny UNWTO dia an'ny Sekretera jeneraly: Very in…
Ny fiampangana ny sekretera jeneralin'ny UNWTO dia mahatonga azy ho mpitsara…
Ny Fifidianana UNWTO dia namono ny fahamendrehana tavela tao amin'ny…
Ny tsy fanajana ny UNWTO an'i Bahrain dia fanitsakitsahana ny JIU…
Geoffrey Lipman dia miantso ny fahamendrehana ao amin'ny UNWTO…
Toy ny mahazatra, eTurboNews niezaka nanamarina tamin'ny UNWTO, saingy tsy nisy valiny azo. Bon Apetit!